शान्ता चौधरी छोरीसँगै एसईई दिँदै - Khabar Break | Khabar Break
दाङ । खुल्ला शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले यस पटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) दिन शुरु गरेकी छिन् । उनले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालयमा खुल्लातर्फबाट एसइई परीक्षा दिन शुरु गरेकी हुन् ।
शान्ता र उनकी १७ वर्षीया छोरी विनु चौधरीले एकै साथ एसइई दिइरहेका छन् । २०७३ सालमा डाँडागाउँ मावि गोग्ली, घोराही–२ मा कक्षा ८ मा भर्ना भएपछि उनको औपचारिक कक्षाको पढाइ शुरु भएको थियो । कक्षा ८ र ९ मा औपचारिक रुपमा नियमित विद्यालय गएर पढे पनि कक्षा १० मा भने नियमित विद्यालय जान सकेकी थिइनन् ।दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ लक्ष्मीपुर निवासी ३८ वर्षीया चौधरीले सानोमा अरूको घरमा कम्लहरी बस्दा पढ्न पाइनन् । उनी झन्डै १८ वर्ष अरुको घरमा कम्लहरी बसिन् ।
दाङमा ४४ वटा केन्द्रबाट ९१ सामुदायिक र ९२ संस्थागत विद्यालयहरु एसइइ परीक्षामा सहभागी भएका छन् । आजदेखि शुरु भएको एसइई परीक्षामा दाङमा १५ दिने सुत्केरी महिला सहभागि भएकी छिन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं। ६ गाईडहर निवासी शुसीला भण्डारीले सोही वडाको माबि सेन्टरबाट परीक्षा दिएकी हुन् । २५ बर्षीया भण्डारीले १५ दिने बच्चालाई लिएर परीक्षा दिईरहेकी छिन् । उनको महेन्द्र माबिमा अध्ययन गरेकी उनको परीक्षा केन्द्र माबि सेन्टरमा परेको थियो । जीवनमा पढाई पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै आफू परीक्षामा सहभागि भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । बच्चालाई आफन्तले हेरिरहेका छन् ।